Qorshihii masaajidka looga dhisi lahaa Umeå oo fashilmay | Somaliska
Af-Soomaali / Islamka & Yurub / Nolosha
Qorshihii masaajidka looga dhisi lahaa Umeå oo fashilmay
Muslimiinta ku nool magaalada Umeå ee waqooyiga Sweden ayaa mudo ku haminayay in ay dhistaan masaajid weyn oo ay isugu yimaadaan. Muslimiinta ku nool Umeå oo lagu qiyaaso in ka badan 2000 ayaa waxaa la soo daristay xaalad adag ka dib markii uu fashilmay qorshihii halkaasi Masaajidka looga dhisi lahaa.
Masaajidka oo laga dhisi lahaa xaafada Ålidhem ayaa waxaa lagu qiyaasay in ay ku baxayso lacag gaaraysa 25 milyan oo karoon taasoo ay awoodi waayeen in ay bixiyaan Muslimiinta Umeå. Lacagta ayaa noqotay sababta ugu weyn ee uu u fashilmay qorshaha Masjidka. Xitaa Muslimiinta ayaa la siiyay ogolaanshihii ay ku dhisi lahaayeen Masjidka balse nasiib daro lacagtii ayaa caqabad ku noqotay.
Qorshaha masaajidka ayaa ahaa in la dhiso dhismo aad weyn oo minaarat dheer leh, waxaa masaajidku yeelan lahaa goob lagu tababarto, kaffe, qeybta dumarka, qolka martida iyo qolka shirarka. Qorshaha masaajidka ayaa mudo socday iyadoo sanadkii 2006 la siiyay ogolaanshaha masaajidka. Qabanqaabiyaasha ayaa isku dayay in ay dowlada lacag ka raadsadaan balse arintooda lamaba eegin.
Waxaa nasiib daro ah in Muslimiinta Umeå oo la siiyay ogolaanshihii ay masaajid caalami ku dhisi lahaayeen aysan u suurto galin lacag owgeed. Arintaan ayaa ah fashil ku yimid guud ahaan Muslimiinta Sweden iyo kuwa caalamka oo aan gurmad u fidin dhisida guriga Allah.
7 arimood oo raggu doonayaan balse aysan dumarka u sheegin
Odayaasha Soomaalida Borlänge oo booliska lagu dacweeyay
DEGMOOYINKA-Kommunada way kala duwanyihiin una kala dabacsanyihiin MUSLIMIINTA –
Magaalo aan deganahay kor waan u dhaafaynaa 7000 (Todobo kun oo Muslimiin ah )lkn ilaa 1991 ayaan masaajid raadis ahayn NASIIB darro waa la la’yahay ilaa hadda ogolaanshahii dhulka.(Inkastoo aan qiraa in gaabis dhanka Muslimiinta ka jiro)
Asc/dhan waxan leyahay marnaba mafashilmo guriga ALLAAH.SW/ lkn qadarti aya dhiman e dadalka halkas halaga siwado,INSHA.ALLAAH, WEY GULEYSAN DONAN INTA MUSLINKA KHALISKA,AH. Hadan intas uga baxo tas walal jimcale bishi 9,laad ayan kusi socona hadad wax war ah inoga heyso ama mawduc ama fah fahin arimaha familada fadlan wanu ubahan nahay hadadan kaheyn na wanu iska sugeyna qerka ALLAHA, nawafajiyo kuligen?
waa nasiib dar ogolaasho masjid oo lehay balse lacag dartee u fashilmay
balse waa rajeyna in mar laga dhiso doono masjid weyn oo minaarat dheer leh magaladan umeå ee ku nolahay insha allaah
August 6, 2012 at 15:09
war yaa ALLAH YAAAN KALMADAAN ISLAAM BAA FASHILMAY KALMAD QURXOON MA AHA
WARBIXIN? Saka wa barigi aya dhulgarir kudhuftay mel 61 km ujirta danmag, galbedka meshaso.ah (halmstad) ilahadana lama oga qasaraha dhabta ah lkn waxa lobadinaya in usan wax qasaro ah usan geysan waxa dhaman laga maqlay ama laga daremay gobol konfurta,ama (skäne) o dhan qasatan xafada (kristianstad) lasoco wixi kusokordho dhulgarirkan kadhacay sweden